Fariimo jaceyl oo cusub | Gaaloos.com
Home » galmada » Fariimo jaceyl oo cusub
Dhambaalkan lixaad ee Cowrada kala leexi cinwaankiisu yahay waxaa qortay gabar u dhalatay Jaziiradda MAALTA oo ka ahayd shaqaale Banki, waxayna warqad u qortay wiil ay is jeclaayeen balse markii ay is dhex galeen ay ka aragtay dabeecad aanay u bogin isaguna aanay ka ahayn kibir iyo qab oo ay abuuris ka ahayd, taasoo ahayd Maseyr xad dhaaf ah.
Haddaba iyadoo mar walba arrintaa ka yaabanayd ayaa galab galbaha ka mid ah iyada iyo saaxiibkeed waxay booqasho ugu tageen qoys ay saaxiibo ahaayeen oo uu joogay wiil afar jir ah oo qoyskaasi ay dhaleen.
Gabadhii iyo wiilkii saaxibkeed ahaa ayaa markii qolka fadhiga lagu soo dhaweeyey gabadhii waxay dhabta soo saaratay wiilkii afar jirka ahaa iyadoo wejigiisana ku beegtay dhinaca wejigeeda, saaxiibkeed ayaa daqiiqado kadib is heyn kari waayay oo ku yiri “Fadlan Cowrada kala leexi” isagoo markaa wejigiisa laga akhrisan karay carro xoog leh, layaab ayay arrintaasi ku noqotay, waxayna ka baqday inuu ku soo duufo oo weerar u geysto.
Gabadhii way fakartay oo waxay is tiri “kani waaba canug yar ee bal ka waran haddii ay dhacdo in wiil aad isku shaqo tihiin ama qaraabo kale tihiin amaba asxaabta ka mid ah uu kula joogo, sow shil iyo fowdo ma dhacayaan”, markaas ayay go’aan ku gaartay in ay ka harto isagoon waxba ka bi’in oo wax dambi ah lahayn marka laga reebo Maseyrka cudurka ku noqday oo sabab u noqday kala harkooda, kolkaas ayay u qortay dhambaal ay ugu muujinayso kala harkooda iyo sababta ay u go’aansatay waxayna ku bilowday sidan:-
“Nin yahahow dambi kuuma hayo oo aan ahayn waxay dabeecaddu ku badday iyo abuurista Eebbe, Ima aadan xumeyn, Imana aadan xaqirin, Meelna ugama aadan dhicin jacaylkeena, Marka laga reebo dabeecadaada hase ahaatee wax baa i galay.
=Run’ahaantii waxa i galay waa arrin aad u weyn, run’ahaantii walaalow, hammi guur soo degdegga baan kaa lahaa, laakiin taa waan hungownay, kadib markii aan kugu arkay waxyaalo aan i cajab galin.
=Walaalow waxaa loo Aroosaa in lagu nasto oo lagu liibaano guurka, iyadoo Nasteexo la baadigoobayo ee looma Arooso in Naarta Codsi loo dirsado.
=Iga raali noqo Aboowe haddii go’aanku kuula muuqdo mid aan iska gaaray, laakiin waxaad ogaataa in aan u dulqaadan waayay Maseyrkaaga faraha badan.
=Nin ka Maseyray wiil Afar jir ah oo aan dhabta si Waalidnimo leh u saartay, maxaa laga fili karaa marka uu igu arko wiilkaas Afar jirka isagoo qaan gaaray oo aan waddo la istaago.
=Suuragal ma aha in qof aad jacayl dhab ah u heyso aad ku kalsoonaan weyso, taasina waa waxa kugu keenay shakiga Maseyrka.
=Marka laga hadlayo dhaqanka & dabeecadda dadka rajo lagama qabo in guul laga gaaro, la macaamilka Saddax nooc oo dadka ka mid ah:-
1. Jacaylka aad jeclaato ruux adigoo dhan ku jiir neceb Rajo lagama qabo inuu miro dhalo.
2. Sidoo kale rajo lagama qabo guulna lagama gaaro arrimaha idiin dhex mara saaxiibkaa oo aadan talo ku heshiin.
3. Guul lagama gaaro oo rajadiisu ma ifto jacaylka ruux ku jecel haddana kaa shakinaya oo aanba kuugu kalsooneyn .
=Gunaanadkii aniga shaqsiyadaada ma necbi, Adigana kuma necbi, laakiin dabeecadaada maseyrka ku laran ayaan nacay ee nabadey.
Title: Fariimo jaceyl oo cusub